‘हेल्लो प्रहरी ! मेरो भाइले अ’परा’ध गर्‍यो’ – Tufan Media News
‘हेल्लो प्रहरी ! मेरो भाइले अ’परा’ध गर्‍यो’
१८ चैत्र २०७७, बुधबार ०७:३९
स्याङ्जा, १८ चैत । एकै गाउँका तीन युवक एकै ट्र्याक्टरमा काम गर्थे। चैत ५ गते दिनभर खोलाकिनारमा ढुंगा, बालुवाको काम गरे। साँझ ट्र्याक्टरमा चालकलाई बीच पारी दायाँ–बायाँ दुई सहचालक बसे। उनीहरू ढुंvगा, बालुवा भरिएको ट्र्याक्टर लिएर गल्याङ नगरपालिका–८ बग्रान्तीतर्फ लागे।
ट्र्याक्टर गुडिरहेकै बेला एक सहचालक १९ वर्षे गणेश गाहा भुइँमा खसेर घाइ’ते भए। त्यसपछि चालकले ट्र्याक्टर फर्काए। घा’इते अवस्थामा रहेका गाहालाई ट्र्याक्टरमै राखेर कालीगण्डकी नदीको साखरघाट पुर्‍याए। तब चालकले काँ’धमा हालेर लगे अनि नदीको बहावसँगै बगाइदिएको पाइएको प्रहरी उपरीक्षक होबिन्द्र बोगटीले बताए। त्यही घट’नाका एक आ’रोपित व्यक्ति हुन्, सहचालक २१ वर्षे सुनील राना। उक्त घ’टना सुनाएपछि दिदीले नै उनलाई प्रहरीमा पु’र्‍याएका थिइन्।
घ’टनापछि राना चालक २४ वर्षे अमित परियारको घरमा बसेका थिए। परियार भोलिपल्ट बिहानै बुटवलमा ससुरालीको घरतर्फ लागे। राना भने पाल्पास्थित दिदीको घरमा पुगे। त्यहाँ बस्दै गर्दा उनलाई उकुसमुकुस भयो।
अन्ततः उनले दिदी देवी घिमिरेलाई घ’टनाको वास्तविकता सुनाए। उनले दिदीलाई भने, ‘मेरो स”हायताले चालक अमित परियारले काँधमा बोकेर लगी अcस्ति राति घाvइते गणेशलाई कालीगण्डकी नदीमा फाvलिदिए।’ यो खबर आजको अन्पूर्ण पोस्ट दैनिकमा छापिएको छ ।